ကိုယ်တော်ချောနဲ့ စာဖတ်သူများသို့ – Nge Naing – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on January 21, 2010April 22, 2010 by kyawkyawoo	Posted in မြန်မာမူစလင်, မြန်မာရသစာပေTagged ကိုယ်တော်ချောနဲ့ စာဖတ်သူများသို့, ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အတွက် စေတမန်, Buddhism, burmese muslim minority, Burmese Muslims, Hatred against Buddhism, http://nge-naing.blogspot.com/, islam, islam. burmese muslim. myanmar muslim, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, nge naing, religion	I have received several emails, asking me to readablog that insulted Buddhism. Myanmar Muslims living overseas are quite concern that the blog may create misunderstanding between Myanmar Muslims and Buddhists, back home.
I have bumped into it once, and left with disgust and anger. I immediately knew what type of people are behind this fishy and filthy weblog.
Well, that is all about. I felt that no Muslim from Myanmar, with the right frame of mind will write these types of insulting words to the faith of their fellow citizens.
We were taught to read and write in Myanmar language. We are now where we are, and who we are, because of our teachers, most of them are Buddhists. Our faiths may be different, but we all belong to one country that is Burma (Myanmar).
I have decided to ignore the fleas of this blogsphere until I have read the following post by Nge Naing. Her post demonstrated the tolerance ofadevout Buddhist, and how knowledge and the level of education elevate mankind into civilized human beings.
The post was well written, that is the reason I want all of you to read.
Thank you Nge Naing, appreciate your good job.
ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုမှာ ဘာသာတရား ကိုးကွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြိး ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ စည်းကမ်းနဲ့ သဘောတရားတွေကို အသိအမှတ် ပြုစေချင်လို့ ဒီပို့စ်ကို တင်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတလော ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုံးစားလို့ မရအောင် မကောင်းဆိုးဝါး ဘာသာအဖြစ် ကျမ်းဂန်ထဲက အချက်အလက် တချို့ကို တလွဲလွဲတချော်ချော် လိုသလို အဓိပ္ပါယ် ကောက်ယူပြီး ထိုးနက် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အတွက် စေတမန် ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ် တခုကို စာဖတ်သူ အတော်များများ သိကြပြီး ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ပတ်က ကျွန်မ C-Box ကို ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် လာပြီး ကျွန်မကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘာသာ မှားယွင်းနေတဲ့ အကြောင်း ကိုတော်ချောဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ လာပြောသွားလို့ ချန်ထားတဲ့ Link အတိုင်း လိုက်သွားတော့ သူ့ဘလော့ဂ်ကို ရောက်သွားပါတယ်။ ၀င်တာနဲ့ပဲ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ သံဃာတော်တွေကို သုံးစားလို့မရအောင် ရိုင်းစိုင်းစွာ ရေးထားတဲ့ စာတွေကို တွေ့ရလို့ ရုတ်တရက်တော့ တော်တော်လေး ဒေါသ ဖြစ်မိတယ်။ အဲဒီစာတွေအပေါ် တချို့က ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြန်ရှင်းပြပြီး သဘောထားပေးထားသူ တွေ ရှိသလို တချို့က မှတ်ချက်တွေမှာ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြန်တုံ့ပြန်ထားတာကိုလည်း တွေ့ရခဲ့ရလို့ ကျွန်မ တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ကိုယ်တော်ချောရဲ့ IP ကို စစ်ကြည့်တော့ သြစကြေးလျားနိုင်ငံ၊ Queen’s Land ပြည်နယ်၊ Brisbane မြို့က ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်။
keep reading at..http://nge-naing.blogspot.com/2010/01/blog-post_12.html
2 thoughts on “ကိုယ်တော်ချောနဲ့ စာဖတ်သူများသို့ – Nge Naing”	January 22, 2010 at 11:11 pm	Nge Naing says:
ဒီပို့စ်ကို ပြန်ဖေါ်ပြပြီး ဖြန့်ဝေပေးတဲ့အတွက် ကိုကျော်ကျော်ဦးကို တကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုအဖြစ် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ချင်ရင် မတူကွဲပြားတဲ့ အယူရှိတဲ့ သူတွေအချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိဖို့ တကယ်ကို မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြန်ဖြန့်ပေးတဲ့အတွက် ကျွန်မ သာဓုခေါ်ပါတယ်။
January 23, 2010 at 9:11 am	kyawkyawoo says:
အခုလိုကျွန်တော့Blog ကိုလာပြီးcomment ရေးပေးတဲ့အတွက်ရယ်
Do you (really) believe in ‘Allah’? Md. Asham Ahmad( Malaysia Insider)စော်ကားခြင်းနှင့်စော်ကားသူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး